အခမဲ့စာအုပ်များရယူရန်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များ | Gadget သတင်း
အခမဲ့စာအုပ်များ download လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များ
Paco L ကို Gutierrez | | စာဖတ်သူများ
ကူးစက်ပျံ့နှံ့ခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မပြိုလဲနိုင်ပါ။ ၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝါသနာများစွာကို အသုံးပြု၍ ဤချုပ်နှောင်ခြင်းကိုအမြတ်အစွန်းဖြစ်စေသောအရာဖြစ်စေ၊ ဆိုင်းငံ့ထားသောထိုစီးရီးများကိုအဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော်တို့ကိုအချို့သောခမ်းနားသောဒီဂျစ်တယ်စာအုပ်များဖြင့်ကြွယ်ဝစေပါသည်။ ဘယ်တော့မှမကောင်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူး ယဉျကြေးမှု ဒီအဘို့ငါတို့အများကြီးအခမဲ့ရွေးချယ်စရာရှိသည်။
ငါတို့ရှိလျှင် တက်ဘလက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်း ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ထောင့်ဖြတ်ဖြင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအခမဲ့ခေါင်းစဉ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်အတွက်အွန်လိုင်းဆိုဒ်များစွာ၏အားသာချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရယူနိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင်ကာယစာအုပ်ဝယ်ယူရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်ကိုစဉ်းစားခြင်းကအလွန်ကောင်းသည်သူတို့ကိုအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုမှာဝယ်ဖို့တောင်မှစတော့ရှယ်ယာဒါမှမဟုတ်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ပြproblemsနာတွေရှိနိုင်တယ်။ ဒါကိုမင်းတို့ပေးမယ် သူတို့ကိုနေအိမ်နှင့်လုံးဝအခမဲ့ရှိသည်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာ.
1 Confinement များအတွက်အယ်ဒီတာအဖွဲ့ပရိုမိုးရှင်း
1.3 သည် Norma
1.4 Roca စာအုပ်များ
1.5 Errata Nurae
အချို့သောအာဏာအရှိဆုံးကြေညာသူအချို့သည်လူ ဦး ရေနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြသရန်အခမဲ့ဘွဲ့များပေးထားသည်။ ဤကဲ့သို့သောခက်ခဲသည့်အချိန်များတွင်ယဉ်ကျေးမှုကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤကြီးစွာသောကြေညာသူတစ် ဦး ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ဒီမြှင့်တင်ရေးအဘို့အ 11 စာအုပ်တွေ pack ကို။ ဒီအပြင်၊ သင်ရှာပါလိမ့်မယ် calendario ဘယ်မှာကျနော်တို့နီးကပ်စွာရရှိနိုင်အပိုဆောင်းစာဖတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုနောက်ကိုလိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ်းလှမ်းချက်၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရန်တက်ကြွစွာရှိနေသည်။ ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
ဒီမှာတွေ့တယ် စာရေးဆရာများ၏အလုပ် ၅ ခုသည် Herralde ဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ သင်၏စာအုပ်များကိုဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်ဖြန့်ဝေသည့်ပလက်ဖောင်းများမှတဆင့်သင်၏ဒေါင်းလုပ်ရယူခြင်းကိုရယူနိုင်သည် iBooks, အမေဇုံ, Google Play စ နှင့်အချို့သောအခြားသူများ။ ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
ပိုပြီး လူငယ်စာပေ၏အမှုတော်နှစ်ဆယ် ၎င်းသည်ဤကြေညာသူသည်အခမဲ့အခမဲ့ကမ်းလှမ်းသောကမ်းလှမ်းချက်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ YouTube နှင့် Netflix မှအနည်းငယ်အဆက်ဖြတ်လိုသောလူငယ်များအားလုံးအတွက်။ ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းရှာရန်မလွယ်ကူပါ၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုရှာနိုင်သည် အပိုင်း "အခြားအရင်းအမြစ်များ" အပိုင်း "အရင်းအမြစ်များ" အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီကိုခေါင်းစဉ်၏ tab မှာရရှိနိုင်ပါ။ ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
ဤထုတ်ဝေသူကဤကိစ္စတွင်ကမ်းလှမ်းသည် ကြီးစွာသောစာပေအမျိုးမျိုး 14 ခေါင်းစဉ်၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောခေါင်းစဉ်များဖြစ်ပြီးမတူညီသောဖြန့်ဖြူးမှုပလက်ဖောင်း ၇ ခုအထိရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
နှစ်ဆယ်ဒီရွေးချယ်မှုတက်စေသောစာအုပ်များဖြစ်ကြသည် ထုတ်ဝေသူများ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် PDF format ဖြင့်အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။ dystopian ပုံပြင်များမှ စ၍ အရေးကြီးသောဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်အချို့ကိုပင်လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ကလေးခေါင်းစဉ်များ ဒီမြှင့်တင်ရေးအတွက်ရရှိနိုင်အမျိုးအစားများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သွားမှာပါ စာပေအကျင့်စာရိတ္တဖြန့်ဝေရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးပလက်ဖောင်းများငွေအကန့်အသတ်မဲ့ပေးကမ်းခြင်းအပြင် ၎င်းတို့တွင်ကြီးမားသောအခမဲ့ရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ဒါကလက်ရှိအခြေအနေကြောင့်မြှင့်တင်ရေးမဟုတ်ပေမယ့်ဒါဟာဖြစ်ပါတယ် ငါတို့တစ်နှစ်ပတ်လုံးရှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာ။
La ဒစ်ဂျစ်တယ်စာပေနယ်ပယ်တွင်ထူးချွန်မှုကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းထားပါအခမဲ့ Kindle eBooks များကိုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘာသာစကားဖြင့်စာပေဆိုင်ရာဂန္ထဝင်စာပေ၊ Cervantes, Lorca သို့မဟုတ် Miguel Hernandez…စသည်တို့ ငါတို့လည်းရှာတွေ့နိုင်တယ် နိုင်ငံခြားအလုပ်များဘာသာပြန်ထားသော အကယ်၍ သင်သည်ဘာသာစကားများစွာကိုသိထားလျှင်အခြားဘာသာစကားများဖြင့်လည်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
Amazon ကအခမဲ့စာအုပ်တွေကမ်းလှမ်းတာအပြင်သင်ဟာ Amazon Prime ဖောက်သည်ဆိုရင်ဘွဲ့တွေပိုပေးတယ်၊ ဒါကြောင့် ၀ ယ်ဖို့ဈေးလျှော့တယ် Kindle Paperwhite ကျွန်တော်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးပြီ ဒီမှာ, မင်းရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်တွေအားလုံးကိုပျော်မွေ့ဖို့။
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးရှာတွေ့နိုင်တယ် စပိန်လိုစာအုပ်ပေါင်း ၁၈၀၀၀ သူတို့ကိုအင်တာနက်မှတဆင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ ရှိသည် အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားများရှိစာအုပ်များ၊ စုစုပေါင်းစာအုပ်ပေါင်း ၁.၄ သန်းမျှရှိသည်။ သူတို့က quarantine စဉ်အတွင်းချေးငွေစောင့်ဆိုင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆိုင်းငံ့ပါပြီ။ ကြှနျုပျတို့ ... လုပျနိုငျပါတယျ အလွယ်တကူ download လုပ်ပါ အကြောင်းအရာတွေအများကြီးထဲမှာ PDF ဖိုင်ရယူရန် como ePUBမင်းကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်တဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေကငါတို့ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အရေးအကြီးဆုံးယဉ်ကျေးမှုအရင်းအမြစ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
ဤကိစ္စတွင်၎င်းသည်လစဉ်ကြေးပေးသွင်းမှုအောက်ရှိငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည် ၁၄ ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း။ ငါတို့ရှာတွေ့နိုင်တယ် ရေးသားထားသောခေါင်းစဉ် ၁၀၀၀ ကျော်နှင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များရှိသည်ညအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိကိုမဖိချင်ပါကအလွန်အဆင်ပြေပါသည်။ ၎င်းတို့ကိုအရောင်းရဆုံးရောင်းသူများ၊ ဂန္ထဝင်များနှင့်အသစ်အဆန်းများအကြားစုစည်းထားသည်။ လျှောက်လွှာနှစ်ခုလုံးအတွက် iOS ကို como အန်းဒရွိုက်။ ငါတို့မှာရှိတယ် ဒီမှာ သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း
ဤနေရာတွင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်လွတ်လပ်စွာဖြန့်ဝေသောထောင်နှင့်ချီသောဂန္ထဝင်များကိုရှာတွေ့နိုင်သည် အများသုံးဒိုမိန်းကျွန်ုပ်တို့တွင်ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ သူတို့ကအမျိုးအစားများသို့အုပ်စုဖွဲ့နေကြသည်။ သူတို့ကရှိခြင်း, စိတ်ကူးယဉ်ပိုင်သို့မဟုတ်မသောသူတို့အကြားခွဲခြားထားတယ် ထိတ်လန့်ခေါင်းစဉ်ကနေကူညီခြင်းနှင့်ပညာရေး. ဒီမှာ ငါတို့သုံးနိုင်တယ်
စာအုပ်များ၊ မဂ္ဂဇင်းများနှင့်ခရီးသွား gu ည့်လမ်းညွှန်များဖြန့်ဖြူးရန်အတွက် subscription-based ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ၁၄ ရက်ကြာအခမဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်း။ လျှောက်လွှာရှိပါတယ် iOS ကို y အန်းဒရွိုက် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ operating system များရှိ devices များထံမှ၎င်းကိုရယူရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။ တက်ဘလက်များ၊ e-book စာဖတ်သူများနှင့်ကွန်ပျူတာများမှလည်းကျွန်ုပ်တို့ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ဒီမှာ ငါတို့သည်သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် လွတ်လပ်သောစာရေးဆရာများ သူတို့ကိုယ်ပိုင်ခေါင်းစဉ်တည်းဖြတ်သူ။ ၎င်းတွင်သီးခြားကဏ္ has တစ်ခုရှိပြီးအခမဲ့ download လုပ်နိုင်သူအားလုံးကိုအုပ်စုဖွဲ့ထားသည့်နေရာတွင်ရှိသည် ဒစ်ဂျစ်တယ် format နဲ့။ ၎င်းတို့အားလုံးနီးပါးကိုအမျိုးအစားခွဲခြားထားတယ် ဇီဝဗေဒ၊ လူသားနှင့်သမိုင်း၊ ကဗျာသို့မဟုတ်စိတ်ပညာ. ဒီမှာ ငါတို့သည်သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဖတ်၊ လေ့လာ၊ ကြီးပွားသည်။ ၎င်းကိုအပိုင်း ၃ ပိုင်းခွဲထားသည်။အကြံပြုထားသောစာအုပ်များ "၊ " PDF မှစာအုပ်များနှင့်စာသားများနှင့် "သင်၏စာဖတ်စွမ်းရည်တိုးတက်စေရန်အရင်းအမြစ်များ"စာအုပ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာများသည်လိုင်စင်ရစာအုပ်နှင့်ပစ္စည်းများအခမဲ့ဖြစ်သည် Creative Commons အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်သည့် (ယဉ်ကျေးမှုလက်လှမ်းမီမှုနှင့်လဲလှယ်ခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သည့်အကျိုးအမြတ်မယူသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်) ဒီမှာ ငါတို့သည်သင်တို့၏က်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
အပြာရောင်မီးအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးမပြုသည့်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည် ညဘက်စာဖတ်ချင်လျှင်၎င်းသည်နောက်ခံအလင်းအတွက် - ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမျက်စိဖိအားနှင့်အိပ်မပျော်မှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဤအမျိုးအစားတစ်ခုစက်မရှိပါက ကျနော်တို့အပြာရောင်အလင်း filter ကိုသို့မဟုတ်စာဖတ်ခြင်း mode ကိုသုံးစွဲဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည် အားလုံးနီးပါးထုတ်ကုန်ဆောင်ကြဉ်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ » စာဖတ်သူများ » အခမဲ့စာအုပ်များ download လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးဆိုဒ်များ
P40 အပြင် Huawei သည် Watch GT 2e၊ လက်ထောက် Celia, Huawei Video နှင့်အခြားအရာများကိုပါမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။